भोलि २०७५ सालको अन्तिम दिन ! तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् वर्षको अन्तिम दिनको राशिफल !
चैत २९, २०७५ PS
भोलि मिति २०७५ चैत महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबार सोहि अनुसार सन् २०१९ अप्रिल १३ तारिख तपाईको दिन, हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल
मानसिक व्यग्रता र शारीरिक अस्वस्थताको सामना गर्नुपर्ने छ । बिद्यार्थी बर्गका लागि पढाई लेखाईको सन्दर्भमा समय मध्यम रहने छ । व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति हुने देखिदैन । सामाजिक रुपमा मान हानी हुन सक्ला बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने छ ।
स्वास्थ्य अनुकुल रहने छ । पारिवारिक वातावरणमा खुसियाली छाउने छ । सोचेका हरेक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । भाग्योदय हुने अधिक सम्भावना रहेको छ । प्रियजनसंगको भेटघाट हुन सक्छ । व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नसोचेको लाभ हुने देखिन्छ ।
निर्धारित समयमा नै सोचेका हरेक कार्य सम्पादन भएर जानेछ । आर्थिक आयोजनाका कार्यहरु सफल भएर जानेछ । बिद्यार्थीको लागि समय मध्यम रहेको छ । आय आर्जनका प्रसस्तै स्रोतहरु खुलेर जानेछ । नोकरी व्यवसायमा लाभ हुने देखिन्छ ।
इष्टमित्र एवम परिवारका साथमा दिन सुखमय रहला। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ । छोटो दुरीको यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ । मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्ला । अचानक धन लाभ हुनेछ । दाम्पत्यजीवनमा घनिष्टताको अनुभूति हुने छ ।
शारीरिक एवम मानसिक अस्वस्थताको सामना गर्नु पर्ने छ । अनावश्यक बादबिवादमा सहभागी नहुदा नै तपाईको लागि कल्याण हुनेछ । आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ । इष्टदेवको पुजा आराधना गर्नाले बिशेष लाभ हुने देखिन्छ ।
व्यापार व्यवसायमा विस्तार भएर जानुका साथै आयमा पनि वृद्धि हुनेछ । नोकरीमा लाभ हुने देखिन्छ ।वैवाहिक सम्बन्धमा सुखानुभूति हुने छ । साथी संगीको साथमा पर्यटनको योग रहेको छ । स्त्री को तर्फबाट बिशेष लाभ हुने छ । सन्तानको सुखको समाचार सुन्न पाइने छ ।
पारिवारिक वातावारणमा खुसियाली छुने छ । ब्यापारमा वृद्धि हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ । माताको तर्फबाट प्रसस्त लाभ मिल्नेछ । कार्यमा सहकर्मीको साथ् र सहयोग भरपुर मात्रामा पाइनेछ । स्वास्थ्य अनुकुल रहनेछ ।
मनमा अधिक मात्रामा नकारात्मकता हाबी हाबी हुनाले सोचे अनुरुपको लाभ उठाउन नसकिएला । सहयोगीले साथ छोड्न सक्छन ।मानसिक अस्थिरता हुनका कारण अनावश्यक वादविवादमा फस्न सकिने छ सवाधना रहनुहोला । विदेश यात्राको लागि समय अनुकुल रहेको छ ।सन्तान सुख मिल्ने छैन । स्वास्थ्य सामान्य रहने छ ।
वाणी एवम व्यवहारमा संयमित हुनु पर्नेछ । सामान्य रुघाखोकीको समस्या देखिन सक्छ । खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ । यात्राको अवसर मिल्नेछ।
परिवार तथा इष्टमित्रका साथमा समय आनन्दपूर्वक बित्ने छ । ब्यापारमा वृद्धि भएर जानेछ । सहकर्मीको साथ् सहयोग मिल्नेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ । यात्राको समभावना रहेको छ । समग्रमा मकर राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन शुभ लाभदायक साबित हुने छ ।
अपेक्षागरे अनुरुप कार्यमा यश किर्ति तथा सफलता मिल्नेछ । परिवारमा खुसियाली छाउने छ । नोकरी ब्यवास्यमा सहकर्मीको साथ् मिल्नेछ । महत्वपुर्ण कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ । प्रतिष्पर्धाका बिचमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिने छ ।
साहित्य लेखन कार्यमा आफ्नो सिर्जनात्मक कला देखाउने समय रहेको छ । बिद्यार्थी वर्गका लागि दिन अनुकुल रहेको छ । प्रियजनको भेटघाटमा नै समय व्यतित हुनेछ । आर्थिक कारोवारका लागि पनि उत्तम समय रहेको छ । समग्रमा तपाईको भोलिको दिनलाई फलदायी नै मान्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, चैत २९, २०७५१२:५०
भोली नयाँ बर्षको पहिलो दिन , तपाई ग्रह दशा कस्तो छ ? भोलिको राशिफल हेर्नुहोस्